Tompon’andraikitra ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny ankizy
Création : 28 juillet 2019
«Ary nony nanatona ilay nandray ny talenta dimy, dia nitondra talenta dimy koa izy ka nano hoe: Tompoko, talenta dimy no natolotrao ahy; indro, nahazo tombony talenta dimy koa aho. Hoy ny tompony taminy: Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky tamin'ny kely hianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midira amin'ny fifalian'ny tomponao.» - Mat. 25:20,21
Tokony hodinihina amim-pitandremana sy amim-pivavahana fatratra ny fanoharana mikasika ny talenta, satria misy fampiharana natao ho an'ny isam-batan'olona, dia ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny ankizy tsirairay izay afaka mandinika tsara izany. Ny adidy sy ny andraikitrao dia mifanaraka amin'ny hamaroan 'ny talenta napetrak'Andriamanitra taminao. Tsy misy mpanara-dia an'i Kristy izay manana talenta miavaka, ka tsy hadinin'Andriamanitra aminy ny fomba nampiasany izany.
Maro ireo nanala tsiny ny tenany tamin'ny tsy nanolorany ny talentany ho amin'ny asa fanompoana an'i Kristy, satria manana fanomezam-pahasoavana sy tombontsoa mihoatra noho ny azy ny sasany. Nanjaka ny fiheverana fa ireo izay manana talenta manokana ihany no tokony hanamasina ny fahaiza-manao ananany ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Noheverin'ny olona fa nomena ho an'ny olona niangarany manokana ihany ny talenta, ka mazava ho azy fa izay tsy ao anatin'izany, dia tsy nantsoina hifampizara ny valisoa lehibe. Tsy izany anefa no naseho tao anatin'ny fanoharana. Rehefa niantso ny mpanompony ilay tompon-trano, dia nanome ny olona tsirairay ny andraikiny. Ny fianakavian'Andriamanitra manontolo dia tafiditra ao anatin'izay manana andraikitra hampiasa ny fananan'ny Tompo napetraka taminy. Ny olona tsirairay, manomboka amin'ny ambany indrindra sy maizina indrindra, ka hatramin'ny Iehibe sy misandratra indrindra, dia mpiasa momba ny moraly, ary nomena fahaiza-manao izay hadinin'Andriamanitra aminy. Na ambony kokoa na ambany kokoa ny haben'ny andraikitry ny tsirairay dia samy tompon'andraikitra amin'ny fampiasana ny talenta nomen'ny Tompony.
Ny fahaiza-manao ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana, ny hery miasa mangina, ny toerana misy, ny fananana, ny fitiavana, ny fiaraha-miory, ireo rehetra ireo dia talenta sarobidy tokony hampiasaina ho an'ny Mpampianatra, mba ho famonjena ireo fanahy izay nahafatesan' i Kristy.
Endrey izany havitsin'ny olona mankasitraka ireo fitahiana ireo! Nanome ny olona tsirairay ny asany Andriamanitra. Nanome ny olona tsirairay araka ny fahaiza-manaony Izy, ary mifanaraka amin'ny fahatokiany ny fahafaha-manao ananany. Mitaky ny olona tsirairay hiasa ao an-tanim-boalobony Andriamanitra. Tokony handray ny andraikitra izay napetraka taminao ianao, ary hanatanteraka izany amim-pahatokiana. - RH, 1 May 1888.